Farmaajo oo fowdo iyo fidno abuur ku soo aruuray | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo fowdo iyo fidno abuur ku soo aruuray
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in aysan dhaqan gal ahayn xil ka qaadis kasta oo lagu sameeyo xubin ka tirsan Golaha Wasiirada Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kadib afar sano oo kibir iyo sharci ku tumasho ah Madaxweynihii hore, Farmaajo, wuxuu ugu danbeyn isku badelay, fidno wade iyo fowdo abuur, u istaagay inuu dalka galiyo xaalado khatar ah, wuxuuna todobaadkaan sare u qaaday baal-maridda sharciga, si uu indhaha cadaaladda uga badbaadiyo eedysanayaasha kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Farmaajo, ayaa mar kale, ka hor yimid tallaabo sharciga waafaqsan oo uu qaday Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Madaxmed Xuseen Roobe, kadib markii ay madaxtooyadu ka soo hor jeesatay go’aanka uu Rooble shaqada kaga raacdeeyay Wasiirkii Amniga Xundubey.
Sida ku cad, cutubka 8-aad, qodobka 100-aad ee Dastuurka, kaas oo qoraya Awoodaha Ra’iisul-wasaaraha, RW-ha waa Madaxa Xukuumadda Federaalka ah, wuxuu awood u leeyahy magacaabista iyo xil ka qaadista xubnaha Golaha Wasiirrada, horgeynta Golaha Shacabka xubnaha Golaha Wasiirrada iyo Barnaamijka Xukuumadiisa si ay u siiyaan kalsooni iyo inuu qabto hawlaha kale ee loogu xilsaaray Dastuurkan ama sharci kale ee waafaqsan Dastuurkan iyo qiyamkiisa.
Farmaajo ayaa geed dheer iyo mid gaaban u koraya sidoo dalka u galin lahaa dagaallo lagu hoobto, oo u qarxa sida ugu dhaqsiyaha badan si ay gacmaha shaciga uga badbaadan Kooxda uu Fahad Yaasiin hoggaaminayo ee ku eedeysan dilka Ikraan Tahliil.